नटिकेको बालविवाह – MySansar
Posted on March 21, 2017 March 21, 2017 by mysansar
-वसन्तप्रताप सिंह –
बझाङ । १३ वर्षको उमेरमा तामझामका साथ विवाह हुँदा दौलीचौरकी राजुला बोहराले केही वर्षमै बेवारिसे हुनुपर्ला भन्ने कल्पनासमेत गरेकी थिइनन् । श्रीमान्को निरन्तर कुटाइका कारण २८ वर्षको उमेरमै उनको जिउ दुख्न थालेको छ । आठ वर्षको अवधिमा तीन सन्तान जन्माएकी उनको तल्लो पेट पनि दुखिरहन्छ । डाक्टरले पाठेघरमा घाउ भएको बताएका छन् । तर, उनीसँग उपचार गर्ने क्षमता छैन ।
श्रीमान्ले अर्काे विवाह गरेपछि घरबाट निकालिएकी उनी सकिनसकी बाहुली खोलाको किनारमा गिटी कुट्छिन् । त्यसले आफूसँग रहेको ६ वर्षको छोराको पढाइखर्च, खाना र डेराभाडा चलाउँछिन् । ‘छोराको माया लाग्छ र बाँचेकी छु,’ उनी विरह पोख्छिन्, ‘छोरो कसैको जिम्मा लाउन पाए, सेतीमा हामफालेर मर्ने थिएँ ।’ सुरुमा राम्रै माया गर्ने उनका श्रीमान् १० कक्षा पास भएपछि धनगढी पढ्न गए । उतैबाट अर्की ल्याए । त्यसपछि त उनलाई दिन÷दिनै कुट्न थाले । उनी सम्झिन्छिन्, ‘कति दिन त मरिसकी भनेर छोडेका थिए । हातखुट्टाले घिस्रेर स्वास्थ्य चौकी पुगेँ । घरका कसैले पनि सहयोग गरेनन् ।’ बालविवाह भएर यसरी दुुःख पाउनेमध्ये उनी त उदाहरण मात्र हुन् ।
यस्तै समस्या छ, भातेखोलाकी लक्ष्मी धामीको पनि । विवाह १४ वर्षको उमेरमा भयो । बिहे भएको चार वर्षपछि श्रीमान्ले अर्को बिहे गरे । दोस्रो बिहे भएसँगै उनका दुर्दिन सुरु भए । पाँच वर्षकी छोरीसमेत रहेकी उनी अहिले सदरमुकाममा मजदुरी गरेर बाँचिरहेकी छिन् । ‘सौता आएपछि सबै परिवार मिलेर कुट्न थाले,’ उनले भनिन्, ‘कुन दिन मार्छन्जस्तो लागेपछि भागेर चैनपुर आएँ ।’ मुद्दा हाल्छे भनेर ससुराले उनको नागरिकतासमेत खोसिदिए । उनले भनिन्, ‘अहिले पनि चैनपुरमा कोसँग सल्केकीछस् । तँलाई मारिदिन्छु भनेर धम्क्याउ ँछन् । मलाई घरमा पनि बस्न दिएनन् । घर छोडेर आउ ँदा पनि मार्ने धम्की दिन्छन् । गरिखानु न मरिजानु भएको छ ।’
जयपृथ्वी नगरपालिका– ५ की शान्ति जोशी (२८) का श्रीमान् मदनराज जोशी पाँच वर्षदेखि बेपत्ता छन् । १४ वर्षको उमेरमा दाजुको दबाबमा परेर विवाह गरेका उनले विवाह भएकै दिनदेखि शान्तिलाई घर छोड्न भनेर कुट्न थालेका थिए । यो क्रम छोरी जन्मेपछि झन् बढ्यो । शल्यक्रियाबाट छोरी जन्माएकी उनलाई मदनले धनगढीको सेती अञ्चल अस्पतालमै छोडेर भागेका थिए । अस्पतालले पनि धेरै बस्न मिल्दैन भनेर निकालिदिएपछि उनी झन्डै एक महिना धनगढीमा बेवारिसे भएर बा ँचिन् । ‘पुसको चिसो, एकातिर काटेको घाउ दुख्थ्यो । धेरै दिन सडकमै बस्नुप¥या,े’ महिला अधिकार मञ्चमा श्रीमान्को खोजी गरिमाग्न आएकी उनले भनिन्, ‘कहिले मागेर खाएँ । अरूको बारीमा लगाएको काउली र रायोको साग चोरेर खाएँ । जसरी भए पनि छोरीलाई बचाएँ ।’
एक महिनापछि आफन्तको सम्पर्कमा पुगेर घर आएकी उनले कति कुटाइ खानुप¥यो हिसाब नै छैन । ‘म माइतीमा पनि टुहुरी हु ँ । मेरो जाने ठाउ ँ कतै थिएन । मारे पनि तेरै पाले पनि तेरै भनेर बसेँ । छोरीलाई पनि मारिदिन्छु भन्थ्यो । खान लागेको खाना पनि फालिदिन्थ्यो,’ उनले भनिन् । आफूले केही गरे पनि घर छोड्न नमानेपछि घरमा भएको सम्पत्ति र जग्गा बेचेर उनका श्रीमान् बेपत्ता भएका हुन् । हाल उनी भारततिर धनगढीकी केटीस ँग अर्काे विवाह गरेर बसेको आफूले सुनेको बताइन् । २७ वर्षकी उनले भनिन्, ‘तैँले घर नछोड्दासम्म यो घरमा फर्किन्न भनेर हिँडेका हुन् । न गरिखानलाई सम्पत्ति छ न कोही सहारा छ । यो उमेरमा मैले के गरेर बा ँच्ने ?’
सानैमा बिहे गरेका कारण अलपत्र परेका यहाँ थुप्रै महिला बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । बझाङ सदरमुकाममा मात्र यस्ता महिला ५० जनाभन्दा बढी रहेको र जिल्लाभरि एक हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा रहेको महिला अधिकार मञ्चले सञ्चालन गरेको महिला सुरक्षा गृहकी प्रमुख सीता सिंह बताउ ँछिन् । ‘स्कुल पढ्दै विवाह गरेका कलिला नानीहरू बिहे गरिसकेपछि अलपत्र परेका छन् । उनी भन्छिन्, ‘पुरुष सहरतिर पढ्न जान्छन् । उतैतिरबाट पढेलेखेकी केटी बिहे गरेर ल्याउ ँछन्,’ बहुविवाह हुनुको पछाडि अधिकांशमा बालविवाह नै कारण हुने गरेको उनले बताइन् । महिला तथा बालबालिका कार्यालयकी प्रमुख लीला घले पनि बालविवाहका कारण महिलामाथि हुने हिंसाले विकराल रूप लिन थालेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘बहुविवाह मात्र होइन, महिलामाथि हुने हरेक खालका हिंसाको पछाडि बालविवाह नै जोडिएको हुन्छ । उमेर पुगेर र मन मिलेर विवाह गरेका महिला हिंसामा परेका घटना कमै छन् ।’
१३ वर्षको उमेरमा विवाह भएकी लेकगाउ ँकी गौंथली धामीलाई श्रीमान् र सासूससुराले गरिबकी छोरी भनेर दिनदिनै कुट्न थाले । गत वर्ष यार्सा टिप्न लेक गएको बेला उनका श्रीमान्ले मरणासन्न हुनेगरी कुटे । उनी भन्छिन्, ‘मरिसकी भनेर छोडेको रहेछ । पछि अरू यार्सा टिप्ने मान्छेले बेहोस अवस्थामा भेटेपछि उपचार गरेर बचाए ।’ उनी ९ महिनाअघि न्याय खोज्दै सदरमुकाम आएकी हुन् । दुई वर्षकी छोरीसहित उनी सदरमुकाम चैनपुर त आइन् । यहाँ आएपछि उनको परिवार झन् आक्रोसित भयो । बजारमा गएर इज्जत फालेको भन्दै उनलाई घर आए मारिदिने धम्की दिन थालेपछि उनी घर फर्किन सकिनन् । बरु उनले श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेद गरिपाऊँ भनेर अदालतमा मुद्दा चलाइन् । उनको मुद्दा विचाराधीन छ । उनी एक आफन्तको होटेलमा भाँडा माझ्ने काम गरिरहेकी छिन् ।
सुवेडाकी गुनी विकको पनि १३ वर्षकै उमेरमा विवाह भएको थियो । विवाहको केही वर्षपछि श्रीमान्ले विभिन्न बहानामा उनलाई पिट्न थाले । कुटाइ सहन नसकी उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन हालिन् । उनका श्रीमान्, प्रहरी र महिला अधिकारकर्मी बसेर कुटपिट नगर्ने सर्तमा उनको मुद्दा मिलाएर घर पठाए । घर गएकै दिन मलाई प्रहरीमा पु¥याइस् भनेर उनका श्रीमान्ले मर्नेगरी पिटे । त्यसयता उनी घर जान सकिरहेकी छैनन् । कहिले माइती र कहिले सदरमुकाममा अलपत्र जीवन बिताइरहेकी छिन् ।
परिवार र समाजले समेत नराम्रो नजरले हेर्ने भएका कारण न्यायको खोजीमा आएका धेरै महिला अलपत्र पर्ने गरेको महिला अधिकारकर्मी बताउँछन् । ‘कानुनी उपचार पाइन्छ कि भनी साहस गरेर सदरमुकाम आउनेहरू घर फर्किन सक्दैनन् । अदालतले न्याय दिएकाहरू पनि परिवारको डरले घर जान सकेका छैनन् ।’ महिला सुरक्षागृहकी प्रमुख सीता सिंह भन्छिन्, ‘कतिपयलाई त समाजले समेत घृणाको दृष्टिले हेर्ने गरेका कारण अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।’ तीन वर्षको अवधिमा महिला अधिकार मञ्चमा मात्र बहुविवाहका कारण हिंसामा परेको भनेर ३० जनाले र बालविवाहका कारण हिंसा भएको भन्दै पाँचजनाले निवेदन दिएको सिंहले बताइन् । महिला विकास अधिकृत लीला घले भने महिलाको नाममा अचल सम्पत्ति नभएका कारण उनीहरू हिंसामा पर्नुपरेको र यसरी अलपत्र परेको बताउ ँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘उनीहरूको नाममा सम्पत्ति भन्ने केही पनि हुँदैन । अधिकांशको त नागरिकतासम्म पनि छैन । विवाहदर्ता त हुने कुरै भएन । यसो हुँदा सबैले हेप्छन् । जतिबेला चाह्यो घरबाट निकाल्न थाल्छन् ।’
2 thoughts on “नटिकेको बालविवाह”
Yo nepali ko dharma nai ho logne lai bhagaman bhanne ra swasni lai nokar banaune.
समजिक अपराध को चारम परकास्ठा, आम नागरिकले कानुनी राज्य भयको महसुस गर्ने दिन कहिले आउला त! यो लोभी पापी को भिड्मा